Semalt: 6 Benefits of Web Scraping For Business
Ny fandinganana tranonkala dia ny teknika izay mamela antsika hanangona angona avy amin'ny tranokala isan-karazany ary fomba mahomby. Mahasoa ho an'ny fanombohana, ny mpividy, ireo manam-pahaizana momba ny media sosialy, ireo mpikaroka ety anaty aterineto, ireo mpianatra, ireo mpampianatra, ireo mpandrindra, ireo mpamorona ary ireo tsy mpandrindra. Ny fanalana ny tranokala dia manome antoka ny famoahana ny angon-kalitao ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny ny fanasitranana ny tranonkala dia voalaza eto ambany.
1. Tsy dia lafo
Azo antoka fa ny fomba fanesorana ny tranonkala dia fomba tsy lany ahafahana mamoaka data azo vakina. Betsaka ny tolotra fanasokoana maro no hita ao amin'ny Internet, anisan'izany ny import. io, izay mahatonga anao ho mora aminao ny handraisanao ny angona avy amin'ny tranonkala malalaka. Noho izany, ny fanariana fako dia tena tsara ho an'ny fanombohana sy mpianatra izay tsy te handany vola fanampiny amin'ny mpanangom-bokatra.
2. Mora ny mampihatra sy mampifandray
Raha vantany vao nisafidy ny fanangonana tahirin-tsarimihetsika tianao indrindra ianao na ny fandinganana tranonkala, dia afaka manitatra ny raharahanao ianao ary afaka mahazo vola be. Izany dia satria ny serivisiana sy ny fampiharana ny tranonkala dia mora ampiasaina ary afaka miditra miaraka amin'ireo browsers rehetra sy rafitra miasa. Azony atao ny mijery sy mamoaka pejy sasantsasany ao amin'ny blôginao na ny tranokala manontolo tsy misy olana.
3. Ny fikojakojana kely ilaina sy ny haingam-pandeha dia azo antoka
Soa ihany fa be dia be ny fandaharana fandraketana daty. Mitaky kely na tsy misy ny fikojakojana izy ireo ary manome tahiry tsara sy voaaro tsara. ParseHub dia fandaharan'asa iray izay tsy mila mikojakoina maharitra ary mampanantena vokatra tsara. Ny serivisy tranonkalan'ny tranonkala dia afaka maka fotoana fohy mba hanangonana ny angon-drakitrao ary tsara lavitra noho ny teknikan'ny fandrindran'ny data.
Ny fanasitranana ny tranokala dia manome valiny marina sy marina, ary tsara kokoa noho ny fomba fitsaboana amin'ny fomba mahazatra. Ny sasany amin'ireo fitaovana enti-manamboatra tranonkala dia haingana sy azo itokisana. Izy ireo dia manome angona ilaina ao anatin'ny segondra ary tsy mamela ny fahadisoana ao amin'ny lahatsoratrao. Ny fanangonam-peo marina araka ny tokony ho izy no fototry ny raharaham-barotra. Raha toa ka manana vidin-tsolika na tarehim-paritra ianao, dia tokony hifidy amim-pahendrena ny fandaharanao amin'ny tranokala na rindrambaiko.
5. Mora mandanjalanja
Ho an'izay rehetra tsy manam-pahaizana sy za-draharaha, ny fitaovana matevina dia mora takarina ary azo ampiharina mora foana. Tsy mila mianatra fiteny sasany toa an'i C ++ na HTML ianao mba hahazoana tombontsoa avy amin'ny rindrambaiko. Plus, ny angon-drakitra tsy misy fetran-diso dia azo antoka, ary vetivety dia voaverina haingana ireo fahadisoana madinika, ka mora ho anao ny mandinika ireo pejy web ho an'ny kalitao.
6. Vonjeo ny fotoana
Raha toa ianao ka manomboka, dia tsy maintsy manana zavatra maro hatao ianao. Ho sahirana amin'ny marketing sy fampiroboroboana ny raharaham-barotra ianao ary tsy afaka maka fotoana ahafahana manangona angon-drakitra. Amin'ny fampiasana fitaovana maotina tsara dia afaka mamonjy ny fotoananao sy ny herinao ianao. Ohatra, Connotate dia fandaharana feno fandrakofam-peo mahatalanjona sy mahatalanjona izay tsy mila koditra ary afaka mamoaka pejy marobe ho anao mandritra ny roapolo minitra fotsiny. Izany no tena famonjena. Amin'ny fitaovana mety tsara dia azonao atao ny manala ny tranokala manontolo. Ny tahirin-kevitra dia tsy hita afa-tsy amin'ny format malalaka Source .